Iintsuku ezili-9 ze-USCCB ze-Life Novena
Ukumakhumbuza isiganeko sikaRoe v. Wade , isigqibo seNkundla ephakamileyo se-US e-1973 esichaphazele imithetho ebekwa ukukhipha isisu kuwo onke ama-50 kunye neSithili sase-Columbia, i-United States Iintetho zamaBhishophu amaKatolika (i-USCCB) icele amaKatolika kulo lonke ilizwe ukuba ukuthatha inxaxheba kwiintsuku ezithoba zokuthandaza, ukuguquka, kunye nokuhambela ukuphelisa isisu. Ukubizwa ngeeNtsuku ezili-9 zoBomi, inkqubo yebhishopu iquka imisebenzi eyahlukeneyo yobomi, kuquka i-Hora oyiNgcwele yokuPhukisa kunye nokuPhulukiswa kunye nePro-Life ye-Rosary Prayer Objectives, kodwa indawo eyi-9 yiNew Novena, echazwe ngezantsi.
Intshayelelo kwiintsuku ezili-9 ze-Life Novena
Ukwenza kube lula kumaKatolika kuwo wonke amazwe ukuba athathe inxaxheba kwi- novena , i-USCCB idalile iintsuku ezili-9 ze-App i-Life iOS, kunye neendlela zokufumana imithandazo ye-novena ngomyalezo wesigidimi kunye ne-imeyile. (Unokufumana imiyalelo kwiiNtsuku ezili-9 ze-Life page kwiwebhusayithi ye-USCCB.) Unokufumana kwakhona zonke izinto ezifakwe kwifomu lemihla ngezantsi.
Kungakhathaliseki ukuba ukhetha ukuthatha inxaxheba kwiintsuku ezili-9 ze-Life Novena, into ebalulekileyo kukuba uthatha inxaxheba. Ukususela ngo-1973, abantwana abangaphezu kwezigidi ezingama-60 baye balahlekelwa ubomi babo ngokusemthethweni, kwaye ukutshatyalaliswa akuzange kumile apho kodwa kuthintela ubomi babo bonke abathintekayo ekukhutsheni isisu. Kwiminikelo yosuku ngalunye lwe-novena, oo bhishophu basikhumbuza ngomonakalo owenziwe kubomi boomama, oobawo, oogogo nomkhulu, oogqirha kunye nabahlengikazi abaye bathatha inxaxheba ekukhutsheni isisu-esinokuphiliswa, kodwa kuphela ngomthandazo nokuguquka, nokwamkela inceba kunye nokuxolelwa kukaYesu Kristu.
Joyina ababhishophu bamaKatolika base-US, abafundi bakho be-website yamaKatolika, kunye nezigidi zamaKatolika kuwo wonke ama-United States ngoJanuwari 21-29, 2017, njengoko sithandazela ukuphela kokukhipha isisu ngokusemthethweni nokuphulukiswa kwabo bathathe inxaxheba, okanye uthinteke, ukhupha isisu.
Imiyalelo yokuthandaza i-USCCB yeentsuku ezili-9 ze-Life Novena
Yonke into oyifunayo ukuthandaza iintsuku ezili-9 ze-Life Novena ingafumaneka apha ngezantsi. Qala, njengoko sisoloko senza, kunye neSayina soMnqamlezo , ke uqhubeke kwimithandazo yosuku olufanelekileyo. Ukuphelisa imithandazo yemihla ngemiqondiso yeSandla soMnqamlezo.
Usuku Lokuqala Lweentsuku ezili-9 ze-Novena yoBomi
Usuku Lokuqala: NgoMgqibelo, ngoJanuwari 21, 2017
Ukuncenga: Ukuguqulwa kweentliziyo zonke nokuphela kokukhipha isisu.
Thandaza kuBawo Wethu , 3 Dumisani uMariya , kunye nozuko.
Ukucamngca: uPapa Saint John Paul II uchaze "inkcubeko yobomi" njengesiqhamo senkcubeko yeqiniso kunye nothando "kwi-encyclical yakhe yeVangeli yoBomi (no-77). Ngaba sakha inkcubeko yobomi ngokuhlala enyanisweni nangothando? Ngaba sihlobo lwabantu abanokukwazi ukuza kwaye beza kufika xa befumene ukuba ukhulelwe kwaye bafuna inkxaso nenkxaso? Sinokubanceda njani abo babandezeleka intlungu yokukhupha isisu ukuze bafumane inceba kaThixo? Amanqaku amancinci "Kwinqanaba elinye elingaphambili" linika iingcebiso zokwandisa uthando lukaThixo kwabanye.
IZenzo zoLungiselelo (khetha eyodwa):
Yiya eklinikhi yokukhipha isisu uze uthandaze, okanye ubeke eceleni ihora namhlanje ukuthandazela abo banzima nesigqibo sokuphila okanye ukufa ngenxa yomntwana ongakazalwa.
Zichitha ixesha elithile libonisa ingqalelo. 77 yeVangeli yoBomi .
Sebenzisa i-Toolkit yeNtlalo yeNtlalo yeNtlonipho yokuzimela ukwakha inkcubeko yobomi kwimidiya yoluntu.
Isinyathelo esinye esongezelelweyo: Ukuba ibhinqa elingalindelekanga likhulelwe kuwe, ngaba uyazi ukuba wenzeni? "Iindlela ezili-10 zokumxhasa xa engalindelanga ngokungalindelekanga" inikeza iingcebiso ezilula, eziphathekayo zothando, ukuxhasa impilo. Kwi "Bridges of Mercy for Post-Isisu Ukuphulukisa," funda indlela onokuyenza ngayo ibhulorho yenceba kaThixo kubantu abathintekayo emva kokukhipha isisu.
NABRE © 2010 CCD. Se tyenziswe ngemvume.
Evangelium Vitae, no.77 © 1995 Libreria Editrice Vaticana. Se tyenziswe ngemvume.
© 2016 USCCB. Isetyenziswe ngemvume ye-USCCB uNobhala we-Pro-Life Activities.
Usuku lwesiBini lweeNtsuku ezili-9 ze-Novena yoBomi
Usuku lweBini: ngeCawa, uJanuwari 22, 2017
Ukuncenga: Ngamana umntu ngamnye obandezeleka ngokulahlekelwa ngumntwana ngokukhipha isisu afumane ithemba kunye nokuphulukiswa kuKristu.
Ukucamngca: Namhlanje, kule minyaka engama-44 i- Roe v. Wade , sicinga ngamashumi amabini adlulileyo apho uluntu lwethu lwamkele ngokusemthethweni ukukhipha isisu. Ukususela kuloo sigqibo esibuhlungu, ubomi obuninzi babantwana babulahlekile, kwaye abaninzi banokuhlupheka ngenxa yokulahleka-ngokuphindaphindiweyo. Nangona kunjalo umnqweno omkhulu kuThixo ukuxolela. Kungakhathaliseki ukuba siphi na ixesha elide silahlekile ecaleni lakhe, uthi kuthi, "Musa ukoyika. Sondeza entliziyweni yam. "
"KwiSigramente yePenteko kunye nokuQinisisana, kuthiwa ukuvuma, siyahlangana noNdikhoyo, ofuna ukuxolela kunye nobabalo bokuphila ubomi obuvuselelwe kuye. ... Obabhishophu kunye nabafundisi banqwenela ukukunceda ukuba unobunzima, ukuxhalaka okanye ukungaqiniseki ngokusondela eNkosini kule sakramente. Ukuba awufumananga le sakramente yokuphilisa ngexesha elide, sikulungele ukukwamukela " ( " Isipho Sokuxolela UThixo " ).
Masibalekele ezandleni zikaYesu, onothando nothando.
Namhlanje, tyelela i-chapel yokubonga kwaye uchithe ixesha kunye noYesu.
Yiya kwi- Confession- namhlanje, ukuba kunokwenzeka-okanye ngeveki. Ngaphambi kokuba uhambe, jonga uSt. Faustina kwaye ufunde okufutshane ngomyalezo wobubele bukaThixo abelana ngawo ngexesha lobomi bakhe.
Thandaza iSahlulo Senceba Esingcwele kwalabo bahluphekileyo ukulahlekelwa ngumntwana ngokukhipha isisu, becela ukuba bafumane ukuphilisa noxolo.
Isinyathelo esinye Ngaphezu:
Ithemba Emva kokukhipha isisu
"Indlela Yokuthetha Nomhlobo Oye Wakhupha Isisu"
Imiba Yokuphila: Ukuxolela nokuPhulukiswa Emva kokukhipha isisu "
"Iimfesane Zenceba malunga nokuPhalalisa isisu"
Usuku lwesithathu lweeNtsuku ezili-9 ze-Life Novena
Usuku Lwesithathu: NgoMvulo, Januwari 23, 2017
Ukuncenga: Kwangathi bonke abantu bayamkela inyaniso yokuba yonke imihla isipho esilungileyo nesipheleleyo, kwaye kufanelekile ukuba siphile.
Ukucamngca: Inkcubeko yethu inomdla wokugqiba-ukugqibelela. Iifoto zifakwe kwi-airbrushed, kwaye ii-media media zibonisa ubomi obubonakala bufezekileyo. UThixo usibiza ukuba sifune ukuphelela, nathi. Akasibizi, nangona kunjalo, ukufezekiswa kweembonakalo okanye ubuchule, kodwa ukufezekiswa ngothando.
Kulo "Isipho Esigqibeleleyo," omnye umzali ulwabelana malunga namava okukhulisa umntwana nge-Down syndrome, ehlukisana noko abantu abakubonayo bayakuqonda: "Kufana nokukhangela iwindi yecala ebonakalayo ngaphandle: Imibala ibonakala imnyama, kwaye Ekubeni ngaphakathi, nangona kunjalo, ilanga likhanya kulo, isiqhamo sinokuqhafaza. Ukusuka ngaphakathi kwintsapho yethu, uthando lukhanyisa ubomi bethu noCharlie. * Yintoni enokubonakala ngathi idideli kwabanye, mhlawumbi ukunyamezela, ngokwenene igcwele ubuhle nombala. "
Ngamana wethu ngamnye unokufumana amandla okuguquka kukaThixo, ukuze amehlo ethu avulekele ubuhle obuhle babantu iNkosi ibeka kuyo ebomini bethu.
Yenza umthandazo wakho umbingeleli waseParish. Ngaphandle kwababingeleli bethu, sasingenayo iMisa okanye iSigramente yoXhobaniso .
Thandazela izihlobo zakho ezifileyo kunye nabo abangenabathandaza.
Sebenzisa ixesha lomgangatho kunye nelungu losapho okanye umhlobo; nikela ukubanceda ngento efuna uncedo.
Isinyathelo esinye Ngaphezu: Unina kaCharlie uhlanganyela "kwisiCwangciso esiPheleleyo" xa abantu bethi, "Andiyi kuze ndikwazi ukuphatha umntwana onesifo sokukhubazeka," uyachaza, "[Y] okanye akanikwa umntwana onesiphene. Unikwe umntwana wakho ukhubazekile ... Uthiwa ukuba 'uphathe' ukukhubazeka. Ubizwa ukuba uthande umntu othile, kwaye ukumnyamekela kuye kukhula kulolu thando .... ] iintliziyo ... ziye zaba zikhulu [ngokunyamekela uCharlie]. "
Uthetha ngokuphathelele "imfihlelo" eyona nyaniso ebalulekileyo yobukho bethu, apho yena kunye nabanye abazali babantwana abane-Down syndrome babelana.
* Igama litshintshile ukuze kube yimfihlo.
Umhla wesine weeNtsuku ezili-9 ze-Novena yoBomi
Usuku Lwezine: NgoLwesibini, uJanuwari 24, 2017
Ukuncenga: Kwangathi abo basondele ekupheleni kobomi babo bathola unyango oluhlonipha isidima sabo kwaye lukhusela ubomi babo.
Ukucamngca: Xa ubaba kaMaggie ekhuselekileyo engozini kwaye ekugqibeleni waholela ekugqibeleni kwakhe, iingxoxo zikaMaggie kunye nezihloko ezibucayi, kwaye iintsuku zakhe zokugqibela zaba lixesha elixabisekileyo yintsapho. Ngeli xesha, uyise kaMaggie wamfundisa ukuba "isithunzi asikwazi ukunciphisa intlungu okanye ukulahleka kolawulo lomntu," ukuba "uYesu wayehamba naye," kwaye "ukubandezeleka kwethu akusikho nto xa sihlangana kunye noKristu nde zeleka.
Njengomfazi oneminyaka engama-50 nomama oneminyaka emithathu, uMaggie wayedinga lo myalezo ngendlela entsha kakhulu xa efumene ukuba unesigulo sokugula. Esikhundleni sokushiya ithemba, wamkela ilifa uyise ayemshiye, elixabisa ubomi awayeshiye kulo: "[Ubomi] buhlala bukho, kwaye buya kuhlala bufanele, bufanele uphile." Funda kabanzi malunga namava akhe "kwiNdaba kaMaggie: Ukuphila NjengoTata."
Thatha ixesha lokubhala inqaku elibhalwe ngesandla ngesandla somntu onesizungu okanye ofuna ukukhuthazwa.
Ukudibanisa noMaggie kwi-video encinane engama-3 ephefumlelweyo kwinqaku, "Ibali likaMaggie: Ukuphila njengoTata."
Funda kwaye ucinge ngo "Ukunyamekela Abathandekayo Ekupheleni Kobomi." Iingcebiso ezilishumi ezixhomekeke kwiintlonipho ezingenammiselo zobomi bomntu zinceda abafundi bazi indlela yokubonelela ngononophelo.
Abaxhasi be-self-assisted suicide bazama ukuhlula ngokucacileyo phakathi kwabo banesifo sengqondo abafuna ukuphelisa ubomi babo kunye nalabo abanezifo ezigugu ezibonisa isifiso esifanayo. "Yonke into yokuzibulala iyingozi" ihlolisisa imiphumo yoluhlu lobuxoki.
Usuku lwesihlanu lweeNtsuku ezili-9 ze-Novena yoBomi
Usuku lwesihlanu: NgoLwesithathu, uJanuwari 25, 2017
Ukuncenga: Ukuphela kobundlobongela basekhaya.
Ukucamngca: "Ukufunda ngokuchanekileyo kweZibhalo kubangela abantu ukuba baqonde isidima esilinganayo samadoda nabasetyhini kunye nobudlelwane obusekelwe kwiminqophiso kunye nothando. Ukuqala ngeGenesis, iSibhalo ifundisa ukuba abafazi namadoda badalwa ngomfanekiselo kaThixo. "(" Xa Ndibiza Uncedo: Impendulo Yomfundisi Kwindlobongela Yasekhaya Kwabesetyhini ")
Ngaba uyayithanda indebe yakho okanye ikhofi kusasa? Ukukhawuleza kwi-caffeine namhlanje, okanye uzame ikhofi yakho emnyama.
Funda indlela yokuthandaza ngayo umthandazo we-Angelus uze ucinge ukuba usho njalo imihla- ekuvukeni, emini, okanye nge-6 ntambama (okanye onke amaxesha amathathu).
Nika ifom yakho oyifunayo (okanye zonke iifom) zeendaba zoluntu ngosuku. Yichitha ixesha elide lokucamngca kwivesi leSibhalo okanye kwivesi.
Inyathelo elinye elingaphezulu: Abathathu kwabaseMelika baxelwa ukuba bazi ixhoba lobundlobongela basekhaya. Funda ukuqonda ezinye zeempawu kwi "Imiba Yokuphila: Ubundlobongela basekhaya," echaza ukuhlaselwa okubuhlungu kwisithunzi somntu esinobudlova basekhaya.
(Izixhobo ezongezelelweyo zobudlobongela basekhaya ziyafumaneka kwiMitshato Yakho, kunye nephepha lewebhu le-USCCB kwizobundlobongela basekhaya.)
Ukuba ukholwa ngumntu owaziyo unokusetyenzwa, kufuneka ubize inombolo ye-hotline yasekhaya yokunceda, okanye umkhuthaze umntu ukuba abize i-hotline okanye iinkonzo zongxamiseko ngokwabo.
Usuku lweSithandathu lweentsuku ezili-9 ze-Novena yoBomi
Usuku lwesithandathu: uLwesine, uJanuwari 26, 2017
Ukuncenga: Ngamana abo bachaphazelekayo bafumana imfesane yeNkosi nokuphilisa.
Ukucamngca: Siyadalwa ngomnqweno wokuthanda nokuthandwa. Sifisa ukuba saziwa, siqondwe, kwaye samukelwe ngenxa yokuba singobani. Ngokwahlukileyo, iifoto zoonografi zisishukumisela ekubeni sisithandane ngokuthandana kwabantu kwaye sizisa intlungu kunye nentlungu. Njengoko kuphawulwe kuMdali Wakhe Intliziyo Ecocekileyo, "yindawo engafanelekiyo yolwalamano lwangempela kunye nolwalamano olusondeleyo, ekugqibeleni luvuyisa ngokwenene."
Nangona kunjalo, "akukho nxeba engekho ekufikeleleni kobubele obusindisayo bukaKristu. UKristu uyithemba lethu! Icawa ivakalisa inyaniso ngothando, ubulili, kunye nesithunzi somntu ngamnye, kwaye ufuna ukunikela inceba kaYehova nokuphulukisa kwabo balimalayo ngoonografi. "
Ungachukumisi inkinobho yokunyusa. Phuma ngqo ebhedeni uze unike imini yakho ngomthandazo kuThixo.
Ukukhawuleza ngokukhawuleza namhlanje. Yidla ukutya ezintathu kuphela.
Khawucinge ngetekisi elungileyo lobugcisa namhlanje, uze ubonakalise ukuba ubuhle bokwenyaniso bunokusondeza njani kuThixo.
Inyathelo elinye elingakumbi : Funda kabanzi malunga nefuthe lezobuqu, ngokomoya, nangengqondo ye-pornography ethi "'Ndihlambulule ngokupheleleyo': Ukuphulukisa kwiZonografi Sebenzisa nokuLungisa" kunye "Imiba Yokuphila: Imifanekiso Engcolileyo kunye Nomnxeba Wethu Wokuthanda."
* I-United States INgqungquthela yamaBhishophu amaKatolika, iKomiti yeLaity, Umtshato, Ubomi bentsapho, kunye nolutsha, Yenza kuMoya ococekileyo: Impendulo yezobuNkokeli kwiIgraphics-Abridged Version. (Washington, DC: United States Intlanganiso yamaBhishophu amaKatolika, 2016).
Usuku lweShenxe lweeNtsuku ezili-9 ze-Life Novena
Usuku lweSixhenxe: NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 27, 2017
Ukuncenga: Ngamana abo banqwenela umntwana wabo bazaliswe ngokuthembela kwisicwangciso sikaThixo sothando.
Ukucamngca: Kunokuba nzima kakhulu kwaye kubuhlungu xa iNkosi ingaphenduli imithandazo yethu ngendlela esithemba ngayo. Sinokungabaza into emininzi kunye nemibuzo, sizibuza ukuba kutheni sijamelana nemingeni esenzayo. Sekunjalo nangona iimbandezelo zethu zivame ukuba ziyimfihlelo, sikholelwa ukuba iNkosi iyasithanda ngenceba enkulu nemfesane engaphaya kwamandla ethu. Ngokwazi oku, sinokuqiniseka ukuba "zonke izinto zisebenza kakuhle kubantu abathanda uThixo, ababizwa ngokuba yiyo injongo yakhe" (Roma 8:28).
Smile. Buza uThixo namhlanje ukuba ubabalo lube nolonwabo ngakumbi kunye nokwabelana nothando lukaKristu kunye nabo bafuna ukukhuthazwa namhlanje.
Namhlanje, thandaza iRosari , okanye nje kwiminyaka elishumi nje, kumntu owenze kakubi okanye odidekile, kwaye ucela ubabalo lokuxolela loo mntu.
Maxa wambi sinokulibala indlela esiyiyolo ngayo ukuba sibe neyona mininzi yemihla ngemihla. Nika ukulala nomsila wakho namhlanje ebusuku.
Isinyathelo esinye ngokuqhubekayo: "Iingqalelo ezisixhenxe xa uhamba ngokuswela i-Infertility" zifuna ukubonelela ngesibonelelo esinemfesane esiluncedo kunye nolwazi kubantu abatshatileyo abahamba ngale ndlela. Nangona ulungelelaniso lwezibini ezinjalo, eli nqaku linceda umntu ukuba afunde, anike ingqiqo kwiva lokungabikho kwengqondo kunye nokunika ulwazi malunga nesidingo sobuthathaka kubudlelwane bethu nalabo abanokuchaphazeleka.
Usuku Okwesibhozo lweeNtsuku ezili-9 ze-Life Novena
Usuku Okwesibhozo: ngoMgqibelo, ngoJanuwari 28, 2017
Ukuncenga: Ukuphela kokusetyenziswa kwesigwebo sokufa ezweni lethu.
Ukucinga: NjengamaKatolika, sikholelwa kwaye sibeka ithemba lethu kuThixo onenceba nothando. Siyazi ukuphuka kwethu kunye nesidingo sokuhlengwa. INkosi yethu isitsho ukuba simxelise ngokugqibeleleyo ngokushumayela kwisithunzi esivela kubo bonke abantu, kubandakanywa nalawo ayenziwayo. Ukholo lwethu nethemba kwintsimi kaThixo othi kuthi, "Banoyolo inceba, baya kuboniswa inceba" (Mt 5: 7) kwaye "Ndiyathanda inceba, kungekhona umnikelo" (Mt 9:13). NjengamaKristu, simbizelwa ukuchasisa isiko lokufa ngokushumayela kwinto ethile enkulu nangaphezulu: iindaba ezilungileyo zobomi, ithemba, nenceba.
Yenza into enhle komnye umntu ngaphandle kokucelwa okanye utshele nabani na. Mthandazele yena ngelixa uyenza njalo.
Funda ngeCawa yokufundisa awuyiqondi kwiCatechism.
Funda ngokuphila kwintlanganiso yanamhlanje. Usenokumangaliswa yindlela enokufana ngayo naye.
Inyathelo elinye elongezelelweyo: Kwabanye abantu abazinikezele ukuxhasa ubungcwele bomi bomi, isihlomelo sokufa singabangela umngeni. Ngokuqondakala kakuhle, nangona kunjalo, imfundiso yamaKatolika ngokuchasene nesigwebo sokufa iyakhohlisa kwaye ihamba phambili. Fumana isizathu sokuba "kwizinto zokuphila: impendulo yamaKatolika kwiNkundla yokuFa."
Usuku lwe-Ninth lweentsuku ezili-9 ze-Novena yoBomi
Usuku lwesithoba: ngeCawa, ngoJanuwari 29, 2017
Ukuncenga: Ukuze uxolo lukaThixo luzalise iintliziyo zabo bonke abahamba ngeendlela zokwamkelwa.
Ukucinga: Incwadi yamaHebhere isikhumbuza ukuba 'sibambelele ngokusisigxina esilikho phambi kwethu. Le nto sinomphefumlo womphefumlo, ngokuqinisekileyo kwaye uqinile' (Heb 6: 18-19). Sithandazela ukuba bonke ababandakanyekayo kwinkqubo yokwamkelwa bayakuzaliswa nethemba likaKristu kunye "noxolo lukaThixo oludlula konke ukuqonda" (Phil 4: 7). Siyakhumbula kwakhona ukuba nathi sinamathela ngokukhawuleza kule nqanawa yethemba, kuba siye safumana "umoya wokutholwa, esiyakhala kuyo ngokuthi, 'Abba, Baba!'" (Roma 8:15). Kwangathi uBawo wethu onothando angagubuzela ngamnye wethu ngothando lwakhe namhlanje kwaye uvule amehlo ethu ngokholo ukuze sibone kwaye sivuyelele ngothando lwakhe.
Yenza isenzo sokholo, ithemba okanye uthando. (www.bit.ly/9DaysFaithHopeLove)
Namhlanje, ungayihoyi izinyo lakho elimnandi. Yenza ukhetho lokutya okunempilo.
Yenza "iyure elithulekileyo" namhlanje, ukucima zonke izixhobo zombane (ifowuni, iPod, ikhompyutheni, umabonwakude, umsakazo, inkqubo yemidlalo yevidiyo), uphinde ubuye ekamelweni lakho. Sebenzisa ixesha lokuthandaza okanye ukuthandaza ngokuthandaza, njenge- "Novena kuSt. Joseph: Kwalabo abasendleleni yokuThatyathwa."
Isinyathelo esinye Ngaphezu koko: uMaya *, owambeka umntwana ukuba athathe umntwana, unikeza iziphakamiso ezithoba zokunikela ngenkxaso eqhubekayo kwi-"Inqaku elijongene nooMama abajongene nalo." Kwi "Uthando lweNtshukumo yoLuthando," uJenny * uxelela ibali lakhe nendoda yomntwana wakhe, uAndreya. *
U-Emmanuel - UThixo Unathi UThixo Uthi Kithi
Umthandazo kuSt. Camillus de Lellis
Umzekelo Wokubonga Umthandazo
Umthandazo wokujongana noyiko
Imithandazo Efanelekileyo Yexesha Elibuhlungu
Khawukhumbule lo Mthandazo kuMama oMkhulu
Imithandazo yeveki yoThembekile
Qonda ukuba Kutheni 'Ukuhlaselwa' Ngamanye amaxesha kutyhilwa 'Vd.'
Ukuhlaziywa kweBuick Cascada ngo-2016
Ibhunga lamaKristu elibizwa ngokuba liBomvu
Ziziphi iiMerika ezahlula kwiZilibi zexesha ezimbini?
I-Chinese Manhua, iiComics, kunye neNewvelveli zeNgcaciso zoKongeza kwiLuhlu lokuFunda
I-pKb Inkcazo kwiKhemistry
Yintoni enokuyenza xa umntwana wakho engafuni ukuya ekhaya
Yintoni iBatesian Mimicry?
Izithuthuto zeGurmukhi (Laga Matra)
Ubudala be-Accountability kwiBhayibhile
Isiphumo soBhengezo seBalfour ekuQulunqweni kukaSirayeli
Imbali ye-Ancient Sumer
George Turklebaum, RIP
Ukugada, Ukwandisa Ukuphumelela Kokubhukuda Kwakho - Dlala I-Golf Golf
Indlela yokudibanisa 'inguqu' (ukutshintsha)